Tetiandro ronika - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Kalandrie Ronika)
Ny tetiandro ronika na kalandrie ronika na alimanaka ronika dia tetiandro ho an' ny taona maro, karazan' izay nampiasaina tao Eorôpa Avaratra hatramin' ny nisiany ka hatramin' ny taonjato faha-19, izay nosoratana amin' ny fampiasana ny abidy ronika. Ny tetiandro ronika dia ahitana tandahatra marindranon-tsary famantarana mifanao ambony ambany. Ny andro miavaka toy ny sôlstisy sy ny ekinôksa ary ny andro fankalazana (isan' izany ny andro Noely sy ny andro firavoravoana hafa) dia fantatra amin' ny fanampiana tandaha-tsary famantarana hafa.
Nosoratana tamin' ny hoditra na nosokirina tamin' ny baon-kazo, na taolana na tandroka. Ny tetiandro ronika tranainy indrindra, sy izay hany avy tamin' ny Andro Antenatenany, dia avy tao Nyköping any Soeda, izay heverina fa namboarina tamin' ny taonjato faha-13. Ny ankamaroan' ireo tetiandro ronika an' arivony izay mbola voatahiry dia vita amin' ny hazo tamin' ny taonjato faha-16 sy faha-17. Nandritra ny taonjato faha-18 dia nahazo aina indray ny fampiasana ny tetiandro ronika, ary tetiandro nampiasaina nanomboka tamin' ny taona 1800 dia manana endrika boatim-paraky varahina.
Miorina amin' ny tsingerina metônika maharitra 19 taona ilay tetiandro, ka mampifandray ny Masoandro sy ny Volana, nefa izany tetiandro izany dia tsy manaporofo ny fahalalana ny halavan' ny taona miankina amin' ny tsingerin' ny Masoandro na ny fisian' ny taona manana tombon' andro. Ireo antsasany afaka mikorisa dia antandahatra sy apetraka eo ampanombohan' ny taona tsirairay amin' ny alalan' ny fanaraha-maso ny fenomanana voalohany aorian' ny tsinam-bolana voalohany aorian' ny sôlstisin' ny ririnina. Ny fenomanana voalohany dia nanamarika ny andron' ny Disting, izay fetin' ny mpanompo sampy sady andro fanaovana tsenabe, izay fantatra koa amin' ny anarana hoe Þing allra Svía ("antenimieran' ny Soedoà rehetra ").
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tetiandro_ronika&oldid=1037644"
Dernière modification le 8 Septambra 2021, à 16:17
Voaova farany tamin'ny 8 Septambra 2021 amin'ny 16:17 ity pejy ity.